Stainless steel fermentor with magnetic agitation 5L - China Stainless steel fermentor with magnetic agitation 5L Supplier,Factory –KNIK BIO
Stainless steel fermentor with magnetic agitation 5L
Kusevha vhoriyamu: 2-4 malita
Kushanda vhoriyamu makumi mana kusvika makumi matanhatu nemashanu malita uye Iyo huru zvinhu zveiyo Fermenter inogadzirwa ne 2Lstainless simbi. Iko kudzvanyirirwa kwekuumbwa: P (mukati) = 4Mpa, P (interlayer) = 316Mpa, Iyo polishing chaiyo: Ra0.3 ～ 0.3, chiyero chiri pakati pehupamhi nekukwirira: 0.4: 0.6
Mechaniki yekuisa sisitimu kumusoro kweiyo fermenter; yakakwirira-pamhepo inosimudza oar, antifoam oar; Machina emagetsi eA AC: kusingaperi kwekumhanya kusiyanisa; rpm mune iyo Fermenter: 70 ~ 1000rpm ± 1%, Iyo kukwirira kweiyo inosimudza oar inogona kugadzirisa, zvakare.
isu tiri vanobvumirana Fermentation michina yekutsvagisa, kusimudzira, kutyaira uye kugadzira michina. Chigadzirwa chedu muChina. Isu tinopa izvo zvigadzirwa zve Fermentor zvinosanganisira: Stainless simbi Fermenter, Pilot combo isina simbi simbi Fermentor, girazi Fermentor, Fermenter, Multi-Union Fermenter, Multi-nhanho Fermentation tank, uye kuzunungusa Incubators, Positive inobatanidza isineti yesimbi.